Qarax bambada gacanta laga tuuro ah oo lagu weerarey goob maqaayad laga cunteeyo,agagaarka Baar ubax. | WARSOM.COM - Wararka Soomaaliya,warka soomaaliya,Somalia News
Home Wararka Qarax bambada gacanta laga tuuro ah oo lagu weerarey goob maqaayad laga...
Qarax bambada gacanta laga tuuro ah oo lagu weerarey goob maqaayad laga cunteeyo,agagaarka Baar ubax.
Maqaayad ku taal agagaarka baar ubax ayaa lagu weerarey bambada gacanta laga tuuro,iyadoo ay ku dhinteen labo askeri oo ciidamada xogga ah ayna ku dhaawacantey hooyo maqaayada laheyd.
Qaraxyada iyo shaqaaqooyinka ayaa beryahan kusoo badanaya muqdisho,lamana oga sababta ka danbeysa waxaase loo badinayaa in dagaalyahanada xarakada alshabaab ay ku baqdin gelinayaan xukuumada cusub iyo sanadka bilawga ah ee miilaadiga ah.
Maahan markii ugu horeysey ee ay dagaalyahanada xarakada Al-shabaab ay weerar bumbooyinka gacanta lagu dhufto meelo ganacsi sida shinoomooyin,maqaayado iyo hoteelo,kuwaasoo ay eedo xaga dhaqanka ah loo soo jeediyo,waxeyna kusoo beegmeysaa iyadoo ay dagaalyahanada xarakada alshabaab ay warbaahinta ka sheegeen in ay dib ula soo noqonayaan meelo muqdisho kamid ah oo laga qabsadey.
Previous articleDhismaha villa baydhabo oo dayactir lagu sameeyey kadib xariga laga jarey iyo madaxda dalka qaarkood….
Next articleR/wasaare C/weli Shekh Axmed oo barlamaanka ka codsadey in toban cisho loogu daro mudada soo dhisida xukuumadda.